MADAGASIKARA SY FRANTSA : Hisy ny fifanakalozana eo amin’ny seha-pihariana momba ny boky
Feno tanteraka ny fahombiazana, izay no azo amehezana ny dian’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin’ireo delegasionina notarihiny tany Parisy Frantsa tao anatin’ny enina andro mahery. 6 juin 2019
Ankoatr’ireo fifanaraham-piaraha-miasa maro eo amin’ny lafiny fampandrosoana ny firenena dia anisan’ny nahazo tombony ihany koa ny sehatry ny fanabeazana eo amin’ny tontolon’ny boky. Isan’ireo nandrafitra ny delegasionina notarihin’ny Filoha ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Tany Parisy Frantsa dia nihaona manokana tamin’ny tale jeneralin’ny tranom-bokim-pirenena Frantsay ny tenany. Tamin’izany no nifampizaràna ny fahaiza-manao eo amin’ny fitantanana sy ny fitahirizana boky. Nohamafisina ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny tranom- bokim-pirenena Frantsay sy Malagasy.
Tafiditra ao anatin’ izany ny fitahirizana ny boky, indrindra ny famadihana azy ireo ho lasa nomerika izay manaraka ny vanin’andro ankehitriny. Ankoatr’ireo dia anisany nodinihina nandritra ity fihaonana teo amin’ny roa tonta ity ihany koa ny fahazoana boky vaovao ho eo anivon’ny tranom-bokim-pirenena, izay mifanaraka amin’ny filàn’ny Malagasy ary ihany koa ny fahazoana ivon-toerana famakiana boky miparitaka manerana ny Nosy. Marihina fa ny volana mey lasa teo iny dia anisany nanamarika ny andro maneran-tany ho an’ny vaky boky i Madagasikara tamin’ny alalan’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina. Hetsika maro no natao tamin’izany toy ny ady hevitra arahina famelabelaran-kevitra, fampirantiana ary tsena be ho an’ny boky. Fanamby goavana apetraky ny minisitera ny hamerenana indray ny fitiavan’ny olona mamaky boky.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (142) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (93) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (90) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (80) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (79) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (69) 22 mai 2020